Dzidzira Kubva Kubva Semalt: Kudzivisa Mobile Malware
Zvigadzirwa zvefoni zvingave zvisingatambudziki zvakadai semaPC pazvinosvika kune malware. Zvisinei, nhamba yefoni dzefoni dzinoshandiswa dzinoramba dzichiwedzera. Kuwanda kwemashoko ega ega muzvikwata izvi zvinowedzerawo, izvo zvinoreva kuti inopa maitiro evanhu vanoita zvemhosva kuti nzvimbo inogona kushandiswa. Dambudziko reMarware haringongopindirani nehutano hwevashandisi asi rinounza nyaya dzine chokuita nekubiridzira uye kubhakwa kwekuziva.
Julia Vashneva, uyo Semalt Mutungamiri Mukuru weMutengi weVatengi, anoyeuchidza kuti mushandisi unoda kutarisira kuchengetedzwa kwemafoni efoni nekuchengetedza kwakafanana sezvavangadai nemapurisa avo kana vachida kuvadzivisa kunze kwekutyisidzira kwemarware. Uyezve, kune dzimwe nzira dzingashandiswa nemushandisi kudzivirira hutachiona nemarware, Trojans, uye mavairasi - oculos espelhados para comprar.
Apo vashandisi vanotanga kusarudza zvekushandisa kwechitatu kune zvigadzirwa zvavo, vanoisa mafoni avo ejeri pangozi. Chikonzero ndechokuti makambani akadai seGoogle neApple vane zvakasimba zvekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwezvivako zvepaIndaneti. Vatengesi vechitatu vanotenga mapurojekiti shoma uye software izvo zvisiri izvo zvisingawanikwi mune zvepamutemo zvese. Izvo vanhu vasingazivi ndezvokuti vanogonawo kunge vane mavharusi nezvimwe zvinhu zvinokuvadza zvinoita kuti mitengo ive yakaderera kuti ivakwekwe kuti vatevere iyo. Vashandi vanoda kunzwisisa kuti vanofanirwa kunamatira kutora software kubva pane zvinovimbiswa. Uyezve, mawebsite akashanyirwa anogonawo kuva magwaro emarware, mavairasi, uye Trojans. Saka, tambira kune vakatendesa keroti yepajw.org.
Mafambisi ekufambisa mafaira anoisa munzvimbo dzakachengeteka zvidziviriro kuchengetedza kuti chigadziri chinoramba chakachengeteka. Chero chipi nechipi chinonyanya kuedza kuedza kuwana maikirwo ezvigadzirwa zvinoda mvumo kubva kumunhu kuita basa rayo risina kuchena. Vashandi vanofanirwa kubhadhara maitiro uye mapurogiramu anokumbira mvumo yekuwana imwe data. Nguva dzose funga kana vachida ruzivo rwacho kuti runobatsira mukuita mabasa avo. Chirongwa ichi chinoedza kuwana mahwendefa akawanda, chichiramba chichiwana uye chichitsvaga purogiramu isingasviki.
Vanhu vanozviwana zvisinganzwisisiki kushandisa laptop kana PC inenge isina kudzivirirwa. Zvisinei, kana zvasvika kune zvigadzirwa zvemagetsi, vanowana zvinyoro zvishoma kuti vadzivirire chigadzirwa chavo nevekuchengetedza software. Vanhu vazhinji vanosarudza kuchengeta ruzivo rwavo rwemunhu mufoni dzavo. Chavasingazivi ndechokuti 96% yavo haina kuuya inotanga kugadzirwa nehutachiona software. Kunyangwe zvakadaro, kune zviuru makumi ezviuru zvepurogiramu yakakanganwa yakawanikwa pane zvigadzirwa zvemafaira zveshamba, zvisingabhadhari zvinogona kubatsira kuderedza dambudziko.
Nguva dzose Tarisai Mobile Applications
Munhu asati atora kana kuwedzera chero zvipi zvitsva zvinoshandiswa kana software, nguva dzose chengeta pane zviripo zviripo, uye kuti vangave varipo. Nokuita kudaro, inova nechokwadi kuti vanopikisa havazobatsiri nekushaya simba mune zvekare kare maitiro ezvigadzirwa zvekushandisa. Developers mishumo yekusunungurwa iyo inouya pamwe chete nemaputi kune zvikwata uye zvikanganiso kubva kumashanduro epfuura. Paunenge uchidaro, tarisa maitiro ekushanda kwekushandisa. Kana pane chirongwa chinoramba chichimhanya uye kuwedzera kwekushandiswa kwepa data, kune huwandu hwakakosha hwekuvhara kwepurogiramu yakave yatapukisa chigadzirwa.
Tarisai App App Reviews
Ongororo yekushanda ine zvimwe zvinoshandiswa nevamwe vashandisi mushure mekushandisa imwe. Mhinduro idzi dzinofanira kutungamira mudziyo wefaira mufoni pakusarudza kuti software ipi yekudzivirira.